Eyona ngcinga inkulu: Leliphi ilizwe esiya kulakha emva kwentlekele ye-corona? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	6 Aprili 2020	• 2 Comments
Ugqirha wezengqondo waseSwitzerland uKarl Jung wathi, "Oko kunika ingqalelo kuyakhula." Ngoku unokubuza ukuba ngaba lo ngumthetho wendalo oqinisekisiweyo, kuba uyibonisa njani into enjalo ngokwenzululwazi? Ngoku sisetyenziselwe ukumamela 'iingcali' kwaye sikwacinga ukuba kunolwazi oluninzi kangangokuba kunzima ukufota yonke loo nto.
Nangona kunjalo kukho inyaniso eninzi kwinto ethethwa nguJung. Ngoku ukuba ndithe kuwe, "Sukucinga ngekati." Ucinga ntoni? Ikati. Kuyanceda ukuqaphela ukuba ingqondo yethu isebenza njani kwaye lixesha lokuba usebenze ngokwenyani.
Ngoku andizukuthetha ukuba mandimamele. Ngoku andifuni ukukuxelela ukuba ujoyine le ndawo kwaye ucime iphephandaba lakho okanye ubhaliso lweTV, kodwa kuya kufuneka ukwazi ukucinga ukuba uqikelelo oluchanekileyo lwenziwe kwaye unokucinga ukuba lubalulekile. Ngokukodwa ngoku.
Xa ulungile, ngoku kukho indawo ekhethekileyo apho unokuchaza khona izimvo zakho nalapho abanye banokuthi baphendule. Yindawo apho unokunikela ingqalelo yakho kwinto ofuna ukukhula kuyo.
Andizukuxelela ukuba ufunde incwadi yam okanye ufunde amanqaku apha kwisiza kuqala. Kungenzeka, kuvunyelwe kwaye kuyanceda ukuba uthatha inxaxheba ukuba uyazi ukuba ulawulo lwembono lusebenza njani kwaye uyazi ukuba basebenza njani abasebenzi be-IMB. Ke iyanceda ukuba uyayibona indlela yokwenyani njengoko siqonda ukuba yakhiwe. Kwenze.
Encwadini ndiyacacisa ukuba unamandla amakhulu kunokuba ucinga. Ungayenza le nto ngoku. Yintoni enika ingqalelo kukukhula, utshilo uJung. Yintoni ekunika ingqalelo yokudala iyila. Intsholongwane ayinakuphila ngokwayo. Ifuna iseli yeendwendwe. Okufanayo kuya kuyo yonke inkqubo ebandakanya yonke intsholongwane eqhuba le planethi; nangona inamandla kwaye ingathetheleleki inokubonakala. Sinokoyisa le meko yeentsholongwane kwimvelaphi yethu yokuyila.
Ukuba uyazi kwasebancinci ukuba unale nto imiselweyo kuwe, ukuba uneminyaka uziva ngathi ikho into ekufuneka itshintshile, ukuba usekhaya ngoku kwaye yonke into yahlukile; ngokuchanekileyo lixesha lokuba usebenze. Ke ngoko, ngena kwihlabathi apho udala khona ukusuka ekwazini kwakho kwaye ngoku wabelane ngezimvo zakho. Yenza ukhetho lwakho ukuqala.
incwadi yakho Iforum yakho
Umbono wokwenene kunye nokwenene
Impembelelo yabangqina, ukuhleka, iindaba zezemidlalo, isondo (kunye nokunye) kumfanekiso wakho wesakhiwo
tags: ngqalelo, intlekele, intsholongwane ye-Corona, eziziimbalasane, Forum, unika, ikhula, izimvo, je, jung, Karl, cinga ngayo, wat, hlabathi
jupasch wabhala wathi:
6 Aprili 2020 kwi-19: 08
Ngayiphi na imeko, kucacile ukuba yeyiphi injongo uBill Gates onayo kum 'yokuvala'…
8 Aprili 2020 kwi-10: 48
Izizwe xa zizonke kwaye wonke umntu ebekade enesimo kwaye engaphakathi kwaye edlulisiwe kwengqondo kwezi zizukulwana zibini zidlulileyo ngombono wokuba urhulumente makakukhathalele kwaye urhulumente ukhona uzokukhathalela ukusuka ebusaneni ukuya engcwabeni.
Inyaniso yokuba amaqela amakhulu kakhulu axhomekeke ekutyeni nakwiziselo ngenxa yezibonelelo / inkxaso / isibonelelo okanye umsebenzi karhulumente ikwakhanyise oku kuxhomekeka ngakumbi kwingqondo yethu.
Imithombo yeendaba enje (umzekelo, kodwa kukho amawaka emizekelo) iinkqubo zabathengi zihlala zigxininisa ukuba imicimbi engalawulwa kakuhle ngurhulumente kufuneka inyuswe kwaye ilungiswe kuba urhulumente kufuneka alungiselele yonke into kwaye asenzele yonke into. Urhulumente wethu othandekayo.
Icawe ibikade inomsebenzi ofanayo, kodwa loo nto inciphile kancinci.
Lixesha lokuba abantu baqonde ukuba AKUKHO MNYE umntu kuwe kwaye AKUKHO MNYE ukho ukuze aqiniseke ukuba AKUKHO MNYE onokuthi ubuye umva. Oorhulumente bakhona kuphela kwinjongo enkulu yokufikelela esiphelweni, ukusebenza kukaMnumzana L ukulungiselela ukuqaliswa kwe-ajenda yakhe, kwaye nabani na oyimilimitha ngaphezulu kwenqanaba lomhlaba uya kuyisebenzela nokuba yeyangaphakathi okanye mhlawumbi angayifumani.
Kufuneka sibuyele emva kwaye ngamanye amaxesha kunokuba nzima ngokwaneleyo.
Utata wam naye ebesazi, akazi kwanto malunga neyelenqe elikhulu (ukuze athethe) kodwa uhlala endikhuthaza esithi soze kubekho mntu uzokunceda okanye onokuthi uphinde uwele, soloko uyenza wedwa.
Ukuba uyayiqonda loo nto kwaye ekugqibeleni ungaziva ngathi iyinyani kwii-capillaries zakho, oko kunokukunika amandla.
« I-Coronavirus covid-19 kunye nesayensi: Ingena njani emzimbeni wakho kwaye uyidlulisela njani?
ICorona Crisis: Ingathabatha ukuya kwiminyaka emi-2 ukuya kweli-3 ukuphuma kokuvalelwa ngaphandle kokuba ulandelele kwangoko kunye neapps »
Utyelelo lulonke: 2.613.271